BLACKPINK လို့ မဟုတ်ဘဲ တခြားနာမည် (၃) မျိုး ပေးဖို့ဖြစ်ခဲ့ဖူးကြောင်း ပြောပြခဲ့တဲ့ Jisoo - Asia News Bar
BLACKPINK လို့ မဟုတ်ဘဲ တခြားနာမည် (၃) မျိုး ပေးဖို့ဖြစ်ခဲ့ဖူးကြောင်း ပြောပြခဲ့တဲ့ Jisoo
BLACKPINK ကို BLACKPINK လို့ မခေါ်ဘဲ တခြားနာမည်နဲ့ခေါ်ဖို့ တွေးကြည့်ဖူးပါသလား? တကယ်တော့ အဖွဲ့နာမည်မပေးခင် BLACKPINK မဟုတ်ဘဲ တခြားနာမည် (၃) ခုပေးဖို့ စီစဉ်ခဲ့ဖူးကြောင်း Jisoo က ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ အရင်တုန်းကဖြေခဲ့ဖူးတဲ့ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ BLACKPINK‘s Jisoo က အဖွဲ့ရဲ့ နာမည်တွေအကြောင်းကို ဖောက်သည်ချခဲ့ဖူးပါတယ်။
လက်ရှိနာမည်ဖြစ်မလာခင် debut လုနီးပါးဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဖွဲ့နာမည်ကတော့ “PinkPunk” ပါတဲ့။ ဒီနာမည်တင်မကဘဲ အရှေ့ပိုင်းမှာလည်း အဖွဲ့နာမည်ကိုစဉ်းစားခဲ့ဖူးကြပြီး နာမည်‌တွေက ထူးဆန်းပြီး အသည်းယားစရာကောင်းလွန်းလို့ မေ့လို့ရရင် မေ့လိုက်ချင်တယ်လို့တောင် Jisoo ကပြောခဲ့ပြန်ပါသေးတယ်။
အဖွဲ့နာမည်ကို ထပ်မံစဉ်းစားတော့ နူးညံ့ခြင်းနဲ့ ခက်ထန်ခြင်းနှစ်ခုကို ဆန့်ကျင်ဖက်သဘောအနေနဲ့ သုံးချင်လို့ “Baby Monster” လို့တောင် သုံးခဲ့ပါသေးတယ်။ တကယ်လည်း အဲ့နာမည်လေးကို teaser image တွေထဲမှာ ထည့်သုံးခဲ့ပါတယ်။ နောက်‌ဆုံးတစ်ခုကတော့ “Magnum” ပါတဲ့။ ဒီနာမည်ကိုကြားတော့ သူတို့ (၄) ယောက်စလုံး အံ့ဩသွားသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဒီနာမည်ကြောင့်ပဲ BLACKPINK ဆိုပြီး မွေးဖွားခဲ့တယ်လို့လည်း ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ BLINK တို့ကော အဖွဲ့ရဲ့ ပေးဖို့စဉ်းစားခဲ့တဲ့ နာမည်တွေကို ဘယ်လိုထင်မိပါသလဲ? တကယ်လို့သာ Baby monster ဆိုတဲ့နာမည်ကိုသာသုံးခဲ့ရင် “Baby Monster in your area” ဆိုပြီး အဖွဲ့ရဲ့ သံချပ်ကတော့ တကယ့်ကို အသည်းယားစရာဖြစ်နေတော့မှာပါပဲ။
Next ကားဂို​ဒေါင်ကို စတူဒီယိုအဖြစ် ဖန်တီးရင်း BTS ရဲ့ အိပ်မက်​တွေကို သုညက​နေစတင်ခဲ့ကြတဲ့ ​နေ့ရက်များ »
Previous « အချောအလှနှစ်ယောက်ရဲ့ ပေါင်းဆုံးဖန်တီးမှုဖြစ်လာတော့မယ့် “Big Mouth” ဇာတ်လမ်းသစ်
Lisa ကို Idol​ တွေထဲမှာ အကအ​တော်ဆုံးအဖြစ် ​ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ “Street Woman Fighter” က Honey J
Oh My Girl ရဲ့ Album ကို ကူးချသုံးစွဲကြောင်း သက်သေတွေနဲ့တကွ ဝေဖန်‌ခံနေရတဲ့ Zhao Lusi
နုပျိုမှုတွေနဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကို အံ့အားသင့်စေခဲ့တဲ့ Zhao Liying
မင်းသားကြီး လီဗြောင်ဟွန်းအတွက် coffee truck ကို ပုံစံအဆန်းနဲ့ပို့ပေးခဲ့တဲ့ မင်းသား Yoo Ah In